I ezingakhokhwanga umsebenzi blood donation e Taibao Group - China Shandong Zhongbaokang Medical
Ngo-June 12,2017, Taibao Iqembu compined Zibo Igazi Centre umkhankaso nikela ngegazi, ingqikithi abasebenzi 220 bahlanganyela umnikelo ngenkuthalo. Ngezinye 8:30 am, I esitezi sokuqala abasebenzi Taibao Iqembu yokudlela yaphenduka ikamelo blood donation yesikhashana, isikhala lahlukaniswa laba endaweni kokubonisana, ukuthola indawo, indawo yendawo igazi kanye nezinye izindawo. Ezingaphezu kwezingxenye ezintathu abahlengikazi kweshumi igazi ethwele professional ukuhlolwa kanye nokuqoqwa kwegazi imishini ukuqala umsebenzi. Esikhathini umsebenzi, Taibao Iqembu Usihlalo Ingungu Duanzhou wahola ku ezingakhokhwanga blood donation futhi wathi umsebenzi blood donation iye ihlelwe izikhathi Taibao Iqembu ezinhlanu. Lesi sikhathi, abasebenzi abangaphezu kuka-500 baye isicelo asebenzayo bangasabela, futhi ekugcineni sithatha ezinye izisebenzi ifaniswe izimo ukubamba iqhaza kulolu blood donation ezingakhokhwanga. Ukuhlanganyela ezingakhokhwanga blood donation hhayi kuphela sithuthukisa wothando nomthwalo wemfanelo wezisebenzi, ushayela abantu abaningi bazi futhi bahlanganyele ezingakhokhwanga blood donation, kodwa futhi isiza abantu abaningi abadinga usizo. Sizimisele ahlele imisebenzi efana okunenjongo njengenhlangano enokuziphatha kutenhlalakahle. Ngosuku olufanayo, Taibao Group, ingqikithi abasebenzi 220 abakhathalelayo ehilelekile yokuzithandela imisebenzi blood donation, le ezuziwe igazi ivolumu awafike 60000 ml. Ekupheleni blood donation, abasebenzi nabo balamukele eziyisikhumbuzo olunikezwa isikhungo igazi idolobha kanye amafutha ezidliwayo, amaqanda nezinye lwezakhamzimba olunikezwa Taibao Group.